Photocatalytic Imba yeNano titanium yakasviba TIO2 zvidimbu
Nano-titanium yakasviba TIO2 ine yakakwira photocatalytic chiitiko uye ine yakakosha mienzaniso yezvinhu. Iine kugadzikana kwemakemikari zvivakwa uye manyuko masosi ezvigadzirwa, parizvino ndiyo inonyanya kuvimbisa photocatalyst. Zvinoenderana nekristaro mhando, inogona kukamurwa kuita: T689 rutil ...
Antibacterial Kushandiswa kweNano Copper Oxide Powder CUO
Mhangura oxide nano-poda yakasviba-nhema nhema yesimbi oxide yeupfu ine akasiyana siyana mashandisiro. Pamusoro pechinzvimbo chevanogadzirisa uye maseru, rakakosha basa reanoano-mhangura oxide inorwisa mabhakitiriya. Iyo inorwisa mabhakitiriya maitiro esimbi oxides inogona kungotsanangurwa se: Pasi pechisimiro chechiedza wi ...
Iyo yekushandisa tarisiro yeanoshanda functional graphene nitrogen-doped graphene
Kuvandudzwa kwesimba rakachena uye rinowedzerwazve inzira huru yekuvandudza nyika yedu nehupfumi. Mumatanho ese etekinoroji yesimba nyowani, magetsi ekuchengetedza magetsi ane chinzvimbo chakakosha, uye zvakare inyaya inopisa mukutsvaga kwesainzi kwazvino. Sezvo ...
Svika pakuziva nekukurumidza nezve Sirivheri Nanowires Kugadzirira, Performance, Maparamende uye Kushanda
Kune akawanda matekinoroji matsva muindasitiri yezvinhu, asi mashoma akave nemaindasitiri. Tsvagiridzo yesainzi inotsvaga dambudziko re "kubva zero kusvika kune rimwe", uye zvinofanirwa kuitwa nemakambani kushandura mhedzisiro kuita zvigadzirwa zvakagadzirwa nevazhinji zvine mhando dzakatsiga. Hongwu Nano ikozvino indu ...
Cerium Oxide Nanoparticles Inogona Kubatsira Kudzivirira Biofilm Kuumbwa uye Caries
Kana kurasikirwa kwebvudzi iri dambudziko kune vanhu vakuru, saka kuora kwemeno (zita resainzi caries) idambudziko remusoro wevanhu kune ese mazera. Zvinoenderana nenhamba, kuitika kwemazino pakati pevachiri kuyaruka munyika yangu kwapfuura 50%, chiitiko chemazino pakati pevanhu vane makore ari pakati chapera ...
Iyo tarisiro yekushandisa yeiyo inoshanda graphene: nitrogen-doped graphene
Nano Sirivheri inorwisa mabhakitiriya Kupararira, Monomer Nano Sirivha Solution, Nano Sirivheri Colloid
Nano sirivheri inorwisa mabhakitiriya, monomer nano-sirivheri solution, uye nano-sirivheri colloid zvese zvinoreva chigadzirwa chimwe chete pano, inova mhinduro yezvakapararira zvikuru nano-sirivheri. Yayo inorwisa mabhakitiriya mhedzisiro yakanyanya kukwirira, uye yakaomeswa nano-mhedzisiro. Iyo antibacterial nguva iri ...
Dzimwe ruzivo rwekutanga nezve nano sirivheri colloid
Mune pre-antibiotic nguva kana nanotechnology isati yabuda, zvinonetsa kusimudzira sirivheri antibacterial tekinoroji kunze kwekukuya hupfu hwesirivheri, kucheka waya yesirivha, uye kugadzira zvigadzirwa zvine sirivheri. Iyo sirivheri remubatanidzwa rinofanira kudzorwa mukati meimwe concentratio ...
Iyo Nongedzo yeKudziya Kufambisa kweNanodiamonds
Mune crystallography, dhayamondi dhizaini inonziwo dhayamondi cubic kristaro chimiro, icho chinoumbwa nekubatana kwekubatana kwemaatomu ecarbon. Mazhinji ekunyanyisa dhayamondi ndiwo mhedzisiro yespu covalent bond simba rinoumba chimiro chakaomarara uye diki n ...
Mhangura oxide nanoparticles inogona kuuraya cancer maseru
Mhangura oxide nanopowder yakasviba-nhema nhema simbi oxide yeupfu ine akasiyana siyana mashandisiro. Pamusoro pechinzvimbo chevanogadzirisa uye maseru, rakakosha basa re nano mhangura oxide inorwisa mabhakitiriya. Iyo inorwisa mabhakitiriya maitiro esimbi oxides inogona kungotsanangurwa se: Pasi pechisimiro chechiedza wi ...
Basa Rinokosha reMetal Molybdenum Mo powder
Metal Molybdenum upfu, Mo nanoparticles, seyakakosha isingawanzo simbi inoita basa rakakosha muminda yesimbi yekunyungudika, kuona, nzvimbo yemuchadenga, mushonga, kurima, zvinokonzeresa, uye maceramics. Kutanga, kunyorera musimbi. Chinangwa chikuru kugadzirwa kwemhando dzakasiyana dze molybdenum ...
Anticorrosive, Antibacterial, Anti-kusvibisa Nanomaterial Sumo
Kusvibisa kwemarine kunogona kukonzera kukuvara kwemahombekombe egungwa, kudzikisira hupenyu hwezvinhu, uye kukonzera kurasikirwa kukuru kwehupfumi uye tsaona dzinoparadza. Kushandiswa kweanopokana-nekusvibisa machira mhinduro yakajairika kudambudziko iri. Sezvo nyika kutenderera pasirese dziri kubhadhara zvimwe ...
Thermal kuputira bvunzo kuenzanisa pakati cesium-doped tungsten oxide Cs0.33WO3 girazi uye akajairwa girazi
Infrared mwenje ine yakakosha yekupisa mhedzisiro, iyo inotungamira zviri nyore kuwedzera kune ambient tembiricha. Girazi rakajairika rekugadzira harina kupisa kwekupisa maitiro izvo zvinongogoneka nenzira dzakadai sekutora mifananidzo. Naizvozvo, pamusoro peyekuvaka girazi, mota firimu, nzvimbo dzekunze, e ...